अखिलमा नयाँ नेतृत्व आउँदै कस्ले मार्ला बाजी ! – BikashNews
अखिलमा नयाँ नेतृत्व आउँदै कस्ले मार्ला बाजी !
२०७५ जेठ ३ गते १६:०७ विकासन्युज
काठमाडौ । अनेरास्ववियुको बैशाख ४ र ५ गते बस्ने केन्द्रिय बैठकले नयाँ नेतृत्व चुन्ने भएको छ । पुर्व अध्यक्ष नविना लामा संघिय सांसद बनेपछि अनेरास्ववियुमा नयाँ नेतृव्व आउन लागेको हो ।
नयाँ नेतृत्वको लागि अध्यक्षमा सुदेश पराजुलीको चर्चा उत्कर्शमा पुगेको छ । किर्तिपुरमा बस्ने केन्द्रिय कमिटी बैठकले पराजुलिलाई अध्यक्ष बनाउने संभावना बढेको हो । सो बैठकबाट अध्यक्ष नबिना लामाले राजीनामा गरेर नया अध्यक्ष चयन गर्ने कार्यसुची छ ।
अध्यक्षका लागि उपाध्यक्षहरु रश्मि आचार्य, महेस बर्तौला, महासचिव ऐन महर र सचिब सुदेश पराजुलीबिच प्रतिस्पर्धा छ ।
आचार्य, बर्तौला र महर केपि ओलि समुहका हुन भने पराजुली माधब नेपाल झलनाथ खनाल समुहका हुन ।
ओलि समुहका तीन जनाबिच प्रतिस्पर्धा चलिरहदा पराजुलीले बाजि मार्ने पक्क भएको हो । पराजुलीलाई अखिल भित्र मिलनसार तथा बौद्धिक व्यक्तित्व मानिन्छ ।
अध्ययनशिल, कुसल संगठक र बौद्धिक व्यक्तित्वका धनी पराजुलीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने माग गर्दै सामाजिक संजालमा अभियान चलिरहेको छ । माधब नेपाल र झलनाथ खनालले समेत पराजुलीलाई अध्यक्ष बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
अध्यक्षमा ओलि समूह बाट शैलेश लामा र सुनिता बरालले पनि दाबी गरेका छन् । महासचिवमा भने नेपाल समूह बाट वसिम आलम र आरती लामाको चर्चा छ । ओलि समूह बाट भने महासचिवमा मकर खड्का, आरसी लामिछाने, समिक बडालले दाबी गरेका छन ।
ओलि समूह आपस जुधिरहदा नेपाल समुहका पराजुलिको पल्ला भारी हुन लागेको हो । अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका ओलि समुहका नेताहरुले नै अन्तिममा पराजुलीलाई सघाउने सम्भावना पनि बढेको नेताहरुले बताएका छन्।
अब बिरामी रिसिभ सेना र स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने
कोरोना अपडेट: संक्रमितको संख्या १२ लाख ३१ हजार नाघ्याे, ६७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
सरकारले काेराेना राेकथामका लागि देशभर ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाउने
तीन जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट काेराेना परीक्षण गरिने
कोरोनासँग जुध्न युएईले गर्याे ७० अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज घोषणा
मनाङबाट फर्किन मानेनन् विदेशी नागरिक
मोबाइलमा रिचार्ज गरी कसरी लिने रिचार्ज बराबरको बोनस रकम ?
WHO महानिर्देशकका ७ हेल्थ टिप्सः जसले कोरोना लाग्नै दिँदैन
डब्ल्यूएचओले गर्यो कोरोनाबाट बच्ने उपायको घोषणा, यस्ता छन् तरिका
भोलिदेखि लकडाउन लचिलो बन्ने, उच्चस्तरीय समितिको यस्तो छ निर्णय
WHO भन्छः फेस माक्स प्रयोग नगर्नुस्